Fadhigii xildhibaannada federaalka ee maanta oo natiijo la?aan ku dhammaaday. – Radio Daljir
Muqdisho Dec 29 ? Kulan maanta mudanayaasha golaha baarlamaanka ee dawladda federaalku ay ku yeesheen aqalka shacabka ee magaalada magaalada Muqdisho ayaan wax natiijo ah ka soo bixin, kaddib markii muddo saacado ah ay fadhiyeen mudanayaal kala aragti duwani.
Fadhiga mudanayaasha oo shalay la shaaciyey ayaa lagu tilmaamay in ajandihiisi uu ahaa sidii cod loogu qaadi lahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Sh. Iraahim Muudeey sida uu warbaahinta u soo gudbiyey guddoonkii ay doorteen wakiillada ka soo horjeeda Shariif Xasan Sh. Aadan.
Mudanayaasha ayaa markii ay yimaadeen xarunta shacabka halkii looga fadhiyey guda-galidda ajandihii la shaaciyey waxaa ay galeen fadhiyo gaargaar ah iyo tashiyo is-waraysi, inkastoo ay u kala fadhiyeen labo qaybood oo mid ahayd mudanayaasha diidan Shariif Xasan Sh. Aadan iyo kuwa taageersan.
Wakhti badan oo mudanayaashu ay madasha fadhiyeen kaddibna waa ay ka soo kala dareereen iyagoon guda-galin, gorfaynna ujeedadii ay meesha u yimaadeen, waxaana jawagi xaruntu uu ahaa mid ka duwan labadii fadhi ee la soo dhaafay kuwaasi oo buuq gacan ka hadal dhaliyey uu ka dhashay.
Ciidamada amniga iyo kuwa AMISOM ayaa xarunta illaalo adag ka hayey si aan rabshadi u dhicin, waxaana xildhibaanno siyaabo kala duwan ula hadlay warbaahinta ay sheegeen in fadhigii xilka looga qaadi lahaa guddoomiye ku-xigeenka dib loo dhigay, halka xildhibaannadii taageersanaa Shariif Xasan-na ay sheegeen in kooramku u dhammaan waayey mudanayaashii ka soo horjeeday Shariif Xasan kaddibna ay meesha ku kala dareereen.
Si kastaba ka ha?ahaatee khilaafka mudanayaasha baarlamaanka ayaa u eg mid sii xoogaysanaya iyadoo ay jireen isku-dayo fara badan oo la xiriiray isku soo dhawayntooda kuwaasi oo madaxweynaha iyo mas?uuliyiin kaleba ay isku-dayeen, hase ahaatee u muuqda kuwa aan waxba ka baddalin aragtiyadii xildhibaannadu ay kala taagnaayeen.